China Static Pressure mandeha ho azy famolavolana Machine sy mpamatsy | Sofiq
Milina fanerena fanerena fanamafisam-peo
Ny teknikan'ny famolavolana tsindry static dia manondro ny fizotran'ny rivotra miaraka amin'ny haitao fametahana piston maro-piston, arakaraka ny fahasarotan'ny fampifanarahana, dia tsy afaka misafidy afa-tsy famerenan-tsolika maro-piston fametahana na airflow ary fanamafisana ny fametahana piston multi-piston.
Milina fanerena fanerena mandeha ho azy static amidy dia ampiasaina mba hamokarana casting isan-karazany toy ny lohan'ny varingarina, fittings fantsom-bolo sarotra, akorany, trano, barazy maotera sns. Ny famokarana novokarin'ny dia hita amin'ny indostria isan-karazany, toy ny milina fanaovana enjeniera, milina lamba, manamboatra fiara famokarana sns
Ny milina Sofiq dia manolo-tena hanome ny mpanjifa ny milina fanamafisam-peo Static Pressure automatique sarobidy indrindra, mba hiantohana ny tsipika famolavolana amin'ny fomba mahomby sy azo antoka amin'ny alàlan'ny fahombiazan'ny fikirakirana avo.
Ny Static Pressure dia manana tombony manaraka.
◆ Fahaizana avo lenta amin'ny famolahana fasika, bobongolo henjana sy matevina, mety amin'ny fanamboaran-tsiranoka sarotra.
◆ Fitoniana amin'ny lafiny refy sy fahamendrehana ambonimbony kokoa.
◆ Fahombiazana avo lenta amin'ny famolavolana.
◆ Takelaka bobongolo miaraka amin'ny taha ambony amin'ny fampiasana.
◆ Toetra miasa tsara sy fitehirizana asa.
Miaraha amin'ny vokatra tsara kokoa amin'ny casting sarotra.
Mialà amin'ny famolavolana casting lehibe sy salantsalany ary kely.
Miaraha amin'ny fanaparitahana avo lenta, ny endrika sy ny habeny marina
Miaraha amin'ny famokarana avo lenta
Miaraha amin'ny vidiny mora, mora ianarana
Degre ny mandeha ho azy: mandeha ho azy, semi-mandeha sns
Serivisy mijanona iray: manomboka amin'ny famolavolana, ny teny nalaina, ny famokarana, ny fametrahana azy, ampiofano ny mpiasa mandra-pahatongan'ny vokatra fanariana mahay
Fitaovana feno fitaovana: manolora tsipika fanariana feno hatramin'ny famokarana bobongolo hatrany am-boalohany ka hatramin'ny vokatra farany mahay
–Ny faritra mekanika amin'ny milina fampitaovana lehibe sy fanampiana avy amin'ny milina CNC, ny fitsaboana hafanana ilaina hiantohana ny fiainana marina sy ny serivisy.
–PLC avy amin'ny SimensS7, miaraka amin'ny efijery mikasika sy ny tambajotra Ethernet sns.
–Sistera Servo avy amin'ny SEW na Siemens ary ary Drive-Frequency Frequency avy ao Rexroth.
–Hydraulika valizy an'ny milina famolahana avy ao amin'ny Rexroth, Cylinder Hydraulika avy amin'ny marika malaza any Shina.
–Fotoan'ny herinaratra ambany avy any Schneide.
–Tombo-kodiarana hydraulic avy amin'ny marika iraisam-pirenena.
–Ny fiakarana avy any Marika marika malaza (HRB / LYC / ZWZ) .WZ).
Teo aloha: Masinina famolavolana rivotra Multi-Piston
Manaraka: Famolavolana boaty ho an'ny tsipika famolavolana ho azy
Sandbox, Famolavolana koveta fanariana, Famolavolana tavoahangy, Masinina bobongolo, Masinina fanodinana semi-mandeha ho azy, Milina Punch Out,